အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ရန် အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်6ခု | Mycanvas
အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ရန် အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်6ခု
သင့်အဖွဲ့အစည်းသည် ထူးခြားသော စံနှုန်းများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်အခါ အဖွဲ့၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များရရှိရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဘုံအချက်များရှိပါသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကိုကြည့်ရအောင်။
1. ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်ပရိုဖိုင်များကို နားလည်ပါ။
သင့်ဝန်ထမ်းများနှင့် သူတို့၏ အလုပ်ပရိုဖိုင်များကို ကောင်းစွာနားလည်မှုရှိခြင်းက သင့်အား ဝန်ထမ်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်အလိုက် အလုပ်များကို လွှဲအပ်ပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ အကြီးအကဲအနေဖြင့် သင်သည် သီးခြားအလုပ်များအတွက် သင့်လျော်သော ဝန်ထမ်းကောင်းများကို ခန့်အပ်ရန် သိမြင်နိုင်ပါတယ်။
ထန်ထမ်းတို့၏ပရိုဖိုင်များပေါ်ရှိ အလုပ်ဖော်ပြချက်အတိုင်း အလုပ်များကို တာဝန်ပေးအပ်ပါ။ ပရိုဖိုင်များနှင့်မညီအလုပ်များပေးအပ်ခြင်းက သင့်လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စေပြီး ထိရောက်မှုအားနည်းစေနိုင်ပါတယ်။
2. အဖွဲ့၀င်များ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
သင့်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် များစွာတန်ဖိုးရှိသောကြောင့် အဖွဲ့၀င်များ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို အာရုံစိုက်ပါ။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ အားနည်းချက်များနှင့် အားသာချက်များကို သူတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် အသိပညာဖြင့် အလုပ်များကို အမြဲတမ်း တာဝန်ပေးပါ။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မည်မျှပင် ဇွဲလုံ့လဝီရိယရှိရှိ အလုပ်ကြိုးစားနေပါစေ၊ ၎င်းတို့အပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ ခွန်အားနှင့် မပြည့်မီသော အလုပ်တစ်ခုကို အတင်းအကြပ် မတွန်းလှန်ပါနှင့်။
သင့်အဖွဲ့သားများသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ပရိုဖိုင်များတွင် ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို ဖော်ပြထားသည့်အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို အနီးကပ်ခြေရာခံခြင်းဖြင့်လည်း ၎င်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ လွယ်ကူသောစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်၊ Asana ကဲ့သို့ app များကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည် သင့်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ခြေရာခံရန်၊ ခြေရာခံနေရန်၊ အစီအစဉ်ဆွဲရန်၊ ပရောဂျက်များကို စုစည်းရန်နှင့် အခြားများစွာကို ကူညီပေးသည်။
၃။ ပလိုအပ်ချက်များကို အသိအမှတ်ပြုပါ။
တစ်ဝက်တစ်ပျက် ပြုလုပ်ထားသော သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော ပရောဂျက်များသည် မည်သည့်လုပ်ငန်း၏တိုးတက်မှုကိုမဆို သတ်ပစ်သည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွှဲအပ်ခြင်းမပြုမီ ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သည်များကို စီစဉ်ပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ကို သင်နားလည်ပြီး အဆုံးပရောဂျက်၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
သင့်အဖွဲ့သည် ယခင်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သော၊ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေပြီး အနာဂတ်တွင် လုပ်ဆောင်မည့် ပရောဂျက်များစာရင်းကို ဖန်တီးပါ။ Trello နှင့် Todoist ကဲ့သို့သော အက်ပ်များသည် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး တာဝန်ခံမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
4. သင့်အဖွဲ့များနှင့် အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်များကို ဆွေးနွေးပါ။
၎င်းတို့အကြောင်း မသိသော ဝန်ထမ်းများအတွက် အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို ပါ၀င်သည့် ပါတီများသို့ ဆက်သွယ်ပေးရမည်။
ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကို အသိပညာပေးရန် သင်တန်းများ စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အပတ်စဉ် update သို့မဟုတ် သတိပေးချက်တစ်ခု ပေးပို့ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို အထူးရှင်းပြသည့်နေရာတွင် ကူညီပေးသည်။
5. လုပ်ငန်းတာဝန်ကို အဖွဲ့ကို အာဏာပေးထားပါ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အလုပ်တွင် ရယ်မောကြသည်။ သင့်အဖွဲ့သားများအား လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြသပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်အဖွဲ့ကို အစပြုပြီး သူတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် လှုံ့ဆော်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ပါဝင်ကူညီရန် အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်လည်း သင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့အား လွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်ရန် နေရာပေးရမည့်အချိန်ကို သိထားပါ။ Airtable ကဲ့သို့ အက်ပ်များကို အသုံးပြုရန် ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်များကို ပြီးမြောက်သောအခါ သင်နှင့် မျှဝေရန် ဇယားစာရွက်ကဲ့သို့သော ပုံစံဖြင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
6. တုံ့ပြန်ချက်များကို ကြိုဆိုပါ။
သင့်အဖွဲ့သားများ၏ တုံ့ပြန်မှုများနှင့် မှတ်ချက်များအတွက် စိတ်ထဲမထားပါနှင့်။ သူတို့ကို ပွင့်လင်းပါစေ။
ကြိုဆိုသော အကြံပြုချက်သည် တာဝန်ပေးထားသော အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်များနှင့်အတူ သင့်ဝန်ထမ်းများရှိနိုင်သည့် စိန်ခေါ်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အလုပ်များကို အချိုးမညီဘဲ သင့်လျော်စွာခွဲဝေပေးရာတွင်လည်း ကူညီပေးပါသည်။
အဖွဲ့သားများ၏ အားသာချက်များကို လှည့်စားပါ။
အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်များကို ထိထိရောက်ရောက် ခန့်အပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ မင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေက မင်းထင်သလောက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ မင်းသူတို့ကို မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကို မင်းတာဝန်မပေးဘူး။
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ အရာတွေကို လုပ်တဲ့အခါ အားစိုက်ထုတ်ပြီး ထူးချွန်ကြပါတယ်။ အဖွဲ့၀င်များအား ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်း တာဝန်များထမ်းဆောင်ရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် ဘေးဥပဒ်အတွက် စာရွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများစုမှာ၊ ၎င်းတို့သည် ပျမ်းမျှရလဒ်များကို ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ဇုန်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အခါ သူတို့ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာ ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။ ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် သင့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။